Maitiro ekuisa XAMPP paLinux? | Linux Vakapindwa muropa
Nhasi Ini ndichagovana newe maitiro atingaite kuisa XAMPP iyo yatinozvitsigira nayo kuti tikwanise kumisikidza yedu yewebhu server pane komputa yedu, chero kukwanisa kuita bvunzo dzemukati kana kuvhura timu yedu saizvozvo.
Kana iwe usiri kujairana XAMPP, rega ndikuudze kuti chii ichi Iyo ipakeji yemahara software kunyorera iyo inoshanda pamwechete kuti iite sewebhu dura.
XAMPP inoumbwa mune ye database manejimendi system MariaDB, webhu server Apache nevaturikiri ve PHP uye Perl kunyora mitauro.
Ini pachangu, ndinofunga iyi inzira yakapusa yekutora iyi yese package, iyo, kusiyana nekuisa yega yega chinhu zvakasiyana, ndiyo yakanakisa sarudzo kune vese vemberi vashandisi uye newbies.
1 Kuisa XAMPP paLinux
2 Mashandisiro ekushandisa XAMPP paLinux?
2.1 Iko folda yeXAMPP iripi?
2.2 / Maitiro ekuona angu ewebhu mapeji akagadzirwa muXAMPP?
2.3 Maitiro ekuona angu XAMPP bvunzo mubrowser?
2.4 Iripi iyo php.ini faira muXAMPP?
Kuisa XAMPP paLinux
Nhanho yekutanga yatinofanira kutora kuti tikwanise kuve neXAMPP yakaiswa pane yedu system ndeye enda kune yayo yepamutemo webhusaiti uye tora iyo inosimudza kuti ivo vanotipa isu yeLinux mune chinongedzo ichi ndicho.
Ipapo isu tichavhura terminal uye isu tichapa mvumo yekuuraya iyo faira iyo yatinotora, tinozviita zvinotevera.
Ziva, parizvino iyo XAMPP vhezheni iri 7.2.4-0 saka zita remazita rinogona kunge rakasiyana neiro raunotora, iwe unongofanirwa kugadzirisa rairo nekutumidza iyo faira yawakadhinda.
Paunenge uchiita iyo inosimudza, yekuisa wizard ichavhura. kwatinozopa zvinotevera nekutambira zvese, izvi kana izvo zvaunoda kuri kugaromisikidzwa.
Kana iwe uchida gadziriro yekumisikidza, iwe ndiwe ucha shandura sarudzo dzinopihwa neanomisikidza kuti zvive nyore uye zvaunoda.
Pakupera kwemisimudziri unenge watove neXAMPP yakaiswa pane yako system.
Mashandisiro ekushandisa XAMPP paLinux?
Kuti umhanye ese masevhisi anoumba XAMPP, unogona kuzviita nekumhanyisa maneja wayo, watinogona kutanga nawo kana kumisa madhimoni ebasa.
Iwe unongofanirwa kutsvaga maneja wavo mune yako menyu yekushandisa.
Zvakare kana uchida unogona kumhanya aya masevhisi kubva kune iyo terminal, Kuti uite izvi, iwe unofanirwa kumhanyisa inotevera mirairo:
Para tanga XAMPP
Para mira XAMPP
Para tangazve XAMPP
Iko folda yeXAMPP iripi?
Kana iwe usiri kuziva kuti iripi nzvimbo kwaunofanira kuisa mapurojekiti ako ekuita bvunzo dzako kana kungoisa mapeji ako ewebhu uye ugone kuaona kubva kubhurawuza nzira inotevera:
/ Maitiro ekuona angu ewebhu mapeji akagadzirwa muXAMPP?
Imwe ye zvikanganiso zvakajairika ndezvekuti havaise mafaira mukati mefaira rakaratidzwa, mune yakapfuura nzira iyo nzira yakapihwa, imwe iyo inowanzoitika zvakanyanya kune newbies ndeyekuti ivo havana iyo Apache kana MariaDB daemon yatanga.
Asi kana iri PHP ndipo panomuka dambudziko, iwe unongofanirwa kuve nechokwadi chekuti iyo Apache neMariaDB masevhisi ari kushanda pasina matambudziko.
Maitiro ekuona angu XAMPP bvunzo mubrowser?
Kana iwe watove watoisa chirongwa chako, chiedze mukati meiyo XAMPP dhairekitori uye iwe unoda kuiona mune browser iwe unongofanidza kunyora mukero bar localhost kana 127.0.0.1.
Kana iwe ukaisa iyo faira "test.php" mu / opt / lampp / htdocs /, mune kero bar unonyora localhost / test.php.
Kana chirongwa chako chiri mu /opt/lampp/htdocs/web/index.php, mune kero bar unonyora localhost / web / index.php.
Iripi iyo php.ini faira muXAMPP?
Iyi yekumisikidza faira inowanzo kuve inobatsira nekuti masisitimu ayo PHP anowanzo kuuya nawo haana kukwana.
Kuti tijairane nezvatinoda isu tinongofanirwa kugadzirisa kukosha kweiyo php.ini iyo iri munzira:
Uye neizvi, ini ndinotenda kuti iwo ndiwo akakosha mazano ekushandisa XAMPP ayo anoverengeka novice anoshandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Maitiro ekuisa XAMPP paLinux?
Chinyorwa chakanaka. Kune inotevera positi maitiro ekuisa xdebug uye debug php kubva kunetbeans.
Anodiwa, kuitira basa, kana uchiisa iyo xampp chirongwa muFedora distro, inondiratidza inotevera meseji FLOATING COMMA EXCEPTION ('CORE' GENERATED) uye inosara isina kuratidza chero chinhu mune iyo terminal.
Chii chingave mhinduro, ndokumbira unditsigire.
Nelson fernando akadaro
MuLinux Mint yakashanda seinotevera:
chmod 777 xamp-linux-x64-7.2.4-0-installer.run
NaChmod + haina kushanda
Pindura kuna Nelson Fernando
Mhoro Nelson, kana mubvunzo wako uri weUbuntu, ndinokusiira dzidziso yakavandudzwa kusvika 2021. Zvakandibatsira zvakanyanya, kana ukaitevera nhanho nhanho hauzove nedambudziko, Maitiro ekuisa Xampp paUbuntu?
Carlos Acosta chinomira mufananidzo akadaro
Kutenda Nelson Fernando, mu ubuntu 20.04 yakashanda zvakafanana ne777
Pindura Carlos Acosta